JINGHPAW KASA: ကေအိုင်အေမျိုးချစ်ရဲဘော်များ ဗမာစစ်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးပစ်ခတ်နိုင်
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေ လဂျားယန်နှင့် ဂျာပူတိုက်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရ စစ်သား အများအပြားသေဆုံးကြောင်း၊ ဒဏ်ရာရ ဗမာစစ်သားများကို လုံရောခ့်ပိုစ့်မှ စစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် လာရောက် တင်ဆောင်သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရ စစ်ရဟတ်ယာဉ် တစ်စီး ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ ပစ်လိုက်သော ကျည်ထိက မီးခိုးတလူလူဖြင့် ပျံသန်းသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
There were many Burmese Government soldiers injured and killed in La Ja Yang and Ja Pu battle, which is under KIA (5th) Brigade area on 14th December according to KIA front line officer report. While military helicopter from Lung Rawk post carried injured Burmese soldiers, the military helicopter was hit by Kachin patriotic soldiers shooting. And the military helicopter flew with smoky.
A ra lo grai na n gun lu sai lo.matut shakut ga lo.A kyu hpyi ya nga ai lo
Karai lata tawn ai amyu ni hpe Karai makawp maga la ai gaw dan dan leng leng rai nga ai law...W.P myu sha ni yawnagawng malai sak ap da let shakut nga ai ni yawng hpe Karai wa tut bau sin nga u ga.
shawnglam kaw shakut shaja nga ai myutsaw shareshagan ni yawng hpe kk bausin makawpmaga ya u ga kyi hpyi dat ai. AMEN.
Grai na kabu sai .Dai nbung li lam kaw kapaw hkru nna yawng si mu ga. Share shagan ni yawng hkam ja nga u ga.
ယုံ လိုက် ကြ ဟေ့။
ယုံ လိုက် ပြီ
Grau Heraklion so hku RSI sai lo
အင်း ရင်မောရပါလား ဘယ်ဘက်ကဘဲသေသေ လူဆိုတဲ့ လူသားတွေ ဘဲ တမြေထဲနေ တရေထဲသောက် ပေါက်ဖော်တွေပါဘဲ ဖဘုရားထံဆုတောင်းခြင်းမှအပ ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေ သူ့အခွင့်မရှိဘဲ စာငှက်တကောင်တောင်မြေပေါ်ကျရိုး ထုံးစံမှ မရှိတာ
တရား ပေါက် တာ အ တုယူစရာဘဲ။အခု အခါ မှာ တော ကြောင် က ချမ်း သာပြီ ။ဒါမျိုး လူ က မ အေး လေ ကြိုက် လေ ဘဲ လေ။
ယုံ ရ မ လား mai byin ai kun
ဘာ မှ မ ဆိုင် ဘူး။သူ ငယ် ချင်း ရေ။
IGLA ROCKET MISSILE pyi rai nlang shi yang HELICOPTER ni nlung gwi mat na sai.HELICOPTERaningmai sha hkra hkra gap jang nmai pyen sai. Share Shagan ni hpe Karai Kasang bau sin nga u ga.
မီးခိုး မထွက် ဘဲ ပျံ တဲ့ လေ ယာဉ် မ ရှိ သ လို ဘဲ။ယောက် ဖ ရေ။
check it out at youtube about MI-24 helicopter.which is using by burmese army in domestic war.
yaw shada lam awng dang na matu matut shangut ga.Karaiabau sin ai n.pu hta shangut sa wa ga oi.
lamu hte aga hpe hpan tawn da ai mau hpa yehowa karai ka sang kaw THA BA WA na la hta kaw nga ai re majaw ---mau hpa shaman chye ju ni hpe lani hte lani myit mada let -- myit pyaw let hkam la let lat nga ga ai --- karai wa na mau hpa chye ju kaw kalang mi hte sha hkring mat ai n-re da--myit mada ai niamatu ga loi mung hka zawn mau hpa sha man chye ju loi nga ai da----tsaw ra ai KIA/KIO jing hpaw wun pawng myu sha ni yawng hpe karai wa bau sin makawp maga ya u ga law --A MEN
ကြည်ထိထားတဲ့လေယဉ်နဲ့ပုံမှန်လေယဉ် မီးခိုးထွက်တာဘယ်တူမှာတုံး လအ နားမလည်ဘူးလား
စည် သူ ကဆ လန် ကဘာဟ။တိတ် တိတ် နေ ယောက် ဖ ရ။မ ထိနဲ့ လ အူ။
re law---AEROPLANE pi n-mu ga ai ni rai nga ga ai ---rai tim an hte jing hpaw wun pawng myu sha na yawng kaw dai hta grau ai lamu hte aga hpe hpan tawn da ai yehowa karai kasang hpe lu la ga ai majaw grai myit dik ai ----- dai hta grau htum ai n-nga sai ----
ကောင်းကွာ ၃၇ တပ်ရင်းလဲသတိထား
နီ တို့ ကီ ချင် တွေ နဲ့ ဘီ မာ တွေ အီ ချင်း
ချင်း ချ ဆာ ချ ကြ ဝ တို့ ကတော့
နီ တို့ ဘက် က ကောင် မ တွေ ကို ဆော် ဖို့
--ီး သွေး ထား ပြီ
တ အား မ တွေးနဲ့ တီ ကောင် လောက် ဘဲ ကျန် နေ ဦး မယ် နော်
share shagan ni grai ram ai.dai she myu tsawatsam rawng ai ni re yaw.